Ụbọchị My Pet » Ise Online dịwara Profaịlụ mejọrọ Iji Zere
Mgbe ọ na-abịa online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, gị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ bụ oké egwu. Ị nwere iji hụ na ị na-gụnyere ihe nile dị mkpa na ozi gbasara onwe gị ma ị na-achọ na-ya ọhụrụ na-akpali. Ka emechara, ị chọrọ kwụpụta!
A bụ ụfọdụ Atụmatụ na ihe na-ezere ikenye gị na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ:
Bad / na-ekwesịghị ekwesị Photos
Ka ihu ya-mbụ amụta ihe ndị na ọ bụrụ na profaịlụ gị foto bụ ihe osise nke ị shotgunning a biya ma ọ bụ flipping anya igwefoto, i nwere ike warding anya nwere ụbọchị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eburu a ọzọ kwesịrị ekwesị foto, na-agbalị izere photos na-blurry, na-kwa n'ebe dị anya na ị na-apụghị ịhụ ihu gị ma ọ bụ na i yi ugogbe anya maka anwụ. A mfe foto nke ị na-amụmụ ọnụ ọchị n'ezie ebube.
Mgbe mgbe na-asụpe na asụsụ Njehie
Ọ bụghị onye ọ bụla bụ a ụtọ asụsụ pro na nke ahụ bụ ihe n'ụzọ zuru okè ezi. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na profaịlụ gị juru na mkpoputa na asụsụ njehie, ndị mmadụ nwere ike awụgharị site profaịlụ gị na-enweghị a abụọ echiche. Na-agba ọsọ a isi ọgwụ ego site profaịlụ gị enwetaghị ọ bụla isi njehie. M ga-na-na-atụ aro na-adịghị eji ederede abbreviations na lingo (dị ka "Ua" kama "gị" ma ọ bụ "BC" kama "n'ihi na") dị ka gị chọrọ profaịlụ gị na-ka o doo anya na nkenke dị ka o kwere.
Sounding Dị ka onye ọ bụla ọzọ
Tọn ndị hụrụ n'anya na-agụ, njem, gaa kirie ihe nkiri, na-egosipụta na-aga maka nri abalị. Ọ bụrụ na ị bụ n'ezie omiiko banyere ihe ụfọdụ, dị ka njem, akọwa n'uju ihe na ihe mere i ji na-amasị ya, ebe i na-na ebe ị chọrọ ịga. Ọ pụrụ inyere ghọọ a mkparịta ụka Starter ma ọ bụrụ na ị na-enye obere ihe nkowa. I nwekwara ike na-agbalị na-ekwu banyere ndị ọzọ pụrụ iche ihe banyere onwe gị. Hey, gị mgbe ndị ọzọ nwere ike n'anya ite ọmụmụ ma ọ bụ spelunking!
Agha ụgha banyere Obere Details
Ọ bụ ihe kwere nghọta na ị chọrọ ngosi gị mma e ji mara na profaịlụ gị ma agha ụgha banyere onwe nkọwa, ọbụna ndị nta, bụ a ọjọọ echiche. Agha ụgha banyere gị elu, gị aro ma ọ bụ ọbụna afọ gị pụrụ iyi ka a nnukwu ihe na mbụ, ma ọ bụrụ na ị akpatre izute a ụbọchị ị zutere online, ha nwere ike iwere na mberede na-amalite na-eche banyere ihe ọzọ ị ghara ụgha banyere. Ime ihe n'eziokwu bụ ihe kasị mma iwu.
Ịgwa Oke Little ma ọ bụ ukwuu
Ọ dịghị onye chọrọ ịgụ na a obere akwụkwọ mgbe agụ ihe online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ. Mgbe profaịlụ bụ kwa ogologo, ọtụtụ ndị na-akụ na pịa na-esonụ profaịlụ. Otu nwere ike kwuru n'ihi na profaịlụ na-mkpụmkpụ. A profaịlụ ịmata onwe gị na otu ma ọ bụ abụọ ahịrịokwu nwere ike ime ka ị na-ele mmasị. Ịchọta zuru okè na-ajụ n'etiti abụọ bụ isi, wee na-profaịlụ gị zuru ezu na ruo n'ókè.